နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ သွားရောက်ကိုးကွယ်မှုကိုတားမြစ်လိုက်ရတဲ့ နတ်ကွန်း - JAPO Japanese News
နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ သွားရောက်ကိုးကွယ်မှုကိုတားမြစ်လိုက်ရတဲ့ နတ်ကွန်း
လာ 10 Feb 2020, 15:55 ညနေ
ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးနောက် နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ သွားရောက်ကိုးကွယ်မှုကို တားမြစ်လိုက်တဲ့ နတ်ကွန်းရှိပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လို့လဲ။? ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာကရော မှန်ကန်ရဲ့လား?
ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ ခရီးသွားတွေက ဂျပန်နတ်ကွန်းတွေဆီကိုလည်းသွားပြီး ဝတ်ပြုကြပါတယ်။ နတ်ကွန်းတွေရဲ့ အစဥ်အလာဆိုတာ ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက် အထူးအမြတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ခံယူပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားအများစုအတွက်ကတော့ ထူးဆန်းတဲ့အရာလို့တွေးပြီး သွားရောက်ဝတ်ပြုကြပေမဲ့၊ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဒေသတစ်ခုမှာရှိတဲ့ နတ်ကွန်းမှာ ပြဿနာလေးတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်
“နိုင်ငံခြားသားတို့ရဲ့ လာရောက်ကိုးကွယ်မှုကို တားမြစ်သည်။”
ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်က သင့်လျော်ရဲ့လား? စာဖတ်သူတို့ရော ဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်မိကြပါသလဲ?
ပုံမှာပြထားတဲ့ နတ်ကွန်းကတော့ Nagasaki ခရိုင် Tsushima မြို့မှာ တည်ရှိပါတယ်။
ကိုးရီးယားနိုင်ငံနဲ့လည်းနီးစပ်ပြီး၊ ကိုးရီးယားလူမျိုး ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကလည်း လာရောက်လည်ပတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုးရီးယားလူမျိုးအားလုံးကို မဆိုလိုပေမဲ့၊ ကိုးရီးယားလူမျိုးထဲကမှ ဆိုးရွားတဲ့အပြုအမူကို ပြုလုပ်ခဲ့သူတွေကလည်း အများကြီးရှိတဲ့အတွက် ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးကတော့ ကိုးရီးယားလူမျိုးတစ်ယောက်က နတ်ကွန်းမှာရောင်းတဲ့ အဆောင်လက်ဖွဲ့တွေကို ခိုးတဲ့အမှုဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။
ဒီလိုမျိုး မမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ရယူထားတဲ့ အဆောင်လက်ဖွဲ့ကရော မိမိအတွက် အကျိုးရှိမယ်လို့ ထင်နေမိတာများလား?
ဒီအရာကို ကိုးရီးယား Youtuber တွေကလည်း ဖုံးကွယ်ထားကြပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒီလိုစာတွေရေးထားတာကိုလည်း မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဒါကို ချွန်နေတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့ ထွင်းခဲ့တာပါ။
အခြားဒေသမှာရှိတဲ့ နတ်ကွန်းတွေမှာလည်း ဒီလိုမျိုးကိုးရီးယားစာနဲ့ ထွင်းထားတာတို့၊ မီးရှို့ထားတာတို့ အစရှိတဲ့ မလုပ်အပ်တဲ့အရာတွေကို ကျူးလွန်ထားတာတွေ တွေ့မြင်ရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ ကိုးရီးယားနိုင်ငံတို့ ၂ နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးက အရမ်းပြေလည်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက် အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်တုံ့ပြန်တာများဖြစ်မလားတော့ မသိနိုင်ပေမဲ့၊ နတ်ကွန်းတွေနဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာတော့ အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်ကျန်ရစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ နတ်ကွန်းတွေမှာ “ကိုးရီးယားလူမျိုးကိုသာ တားမြစ်သည်” လို့မဟုတ်ဘဲ၊ နိုင်ငံခြားသားအားလုံးကို တားမြစ်ဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
မကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့လူတွေကိုတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဖမ်းဆီးပြီးဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နတ်ကွန်းတွေမှာ လူနည်းစုလောက်ပဲခန့်အပ်ထားတာကြောင့် ဝန်ထမ်းတွေကလည်း လိုက်လံဖမ်းဆီးဖို့အချိန်မရှိပါဘူး။
လက်ဆော့ပြီးရေးခြစ်ထားခြင်းခံရတဲ့ နံရံကလည်း ရှေးဟောင်းတန်ဖိုးကြီးတဲ့ ယဥ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီထပ်ဆိုးလာတဲ့အပြုအမှုတွေမဖြစ်ရအောင် နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေကို တားမြစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုးတားမြစ်လိုက်တာက ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအရမဟုတ်ပေမဲ့၊ အဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ရင် မဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေကိုလည်း နားလည်မိပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေရဲ့ လာရောက်ကိုးကွယ်မှုကို ပိတ်ပင်လိုက်တာက လူ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ ထင်မိတဲ့သူတွေလည်း သွားပြီးဆွေးနွေးကြည့်လို့ရပါတယ်။
စိတ်မကောင်းတော့ ဖြစ်ရပေမဲ့လည်း အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးကတည်းက နိုင်ငံခြားသားတွေ သွားခွင့်မရှိတော့တာပါ။
တကယ်လို့ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေသာ နည်းမသွားဘဲဆက်ပြီးဖြစ်နေအုံးမယ်ဆိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ အခြားသောနတ်ကွန်းတွေမှာလည်း ဒီလိုနိုင်ငံခြားသားတားမြစ်မှုတွေ ဆက်ပြီးဖြစ်လာရအုံးမှာပါပဲ။
စာဖတ်သူတို့လည်းဂျပန်ရဲ့ ယဥ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ နတ်ကွန်းတွေဆီသွားပြီး ဆုတောင်းဆန္ဒပြုချင်တဲ့သူတွေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက် အထွဋ်အမြတ်ထားတဲ့နေရာကို ဒီလိုမကောင်းတဲ့အကြံအစည်တွေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဂျပန်လူမျိုးတိုင်းက ဝမ်းနည်းမိမှာအမှန်ပါပဲ။
စာဖတ်သူတို့ရော ဒီလိုတားမြစ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုထင်မိပါသလဲ?
“いけたら行くね！”　လို့ပြောတာက တကယ်သွားမယ့် အဓိပ္ပာယ်လား ?
လူဆိုးဂိုဏ်းဝင်တွေ ဖြစ်လာကြတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြားသား လူငယ်များ
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့အတွက် သေဒဏ်ပေးခြင်း !!!
လက်ရှိ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Bubble Tea နဲ့ အမှိုက်ပြဿနာ